အောကျတိုဘာ 2019 – Healthy Life Journal
ဆီးကျိတ်အကြောင်း သိချင်ပါတယ် . . .
မေး. ကျွန်တော် အသက် ၆၀ကျော် သက်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆီးကျိတ်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးကျိတ် ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ၊ ဆီးကျိတ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်လို့ရပါသလား၊ ဆီးကျိတ်ကနေ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအဖြစ်ကူးပြောင်းလွယ်ပါသလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အမျိုးသားတိုင်းမှာ ဆီးအိမ်အ၀ကျဉ်ချောင်းထိပ်ရှိ ဆီးကျိတ်ဆိုတာ...
– ငွေကြယ်စင်ယံ BMI တွက်နည်းကိုသုံးပြီး ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ အရပ်အမောင်းကို တွက်ချက်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်အလေးချိန်က ပုံမှန်ရှိသင့်သလောက်မရှိဘဲ ပိန်နေပါသလား။ ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်ဘဲ ပိန်လွန်းတာကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အရိုးပါးလွယ်တာလိုမျိုး ဆိုးကျိုးတချို့ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပြည့်ပြီး ပိုမိုကြည့်ကောင်းလာစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။ ပိန်တဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာအောင် ကြိုးစားရတာကလည်း...
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိပ်မပျော်တာက ဒီနေ့ခေတ်လူတွေကြားမှာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ တစ်နေ့တာ နေထိုင်စားသောက်ပုံမမှန်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုမကောင်းခြင်း စတာတွေကြောင့် အတွေ့ရများတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ပါ။ အိပ်မပျော်တဲ့ သူတွေကြားမှာ အိပ်ခန်းအေးအောင်ထားတာ၊ အိပ်ခန်းကိုမှောင်ပြီး တိတ်ဆိတ်အောင်ထားတာ ဒါတွေကလည်း သိပ်အသုံးမ၀င်လှပါဘူး။ အမေရိကန်လူမျိုးတွေကတော့ အချိန်နှစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းကို...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) (အတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အဖြစ်များတဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. အဖြစ်များတဲ့ကင်ဆာတွေကတော့ ရင်သား၊ သားအိမ်ခေါင်း၊ အဆုတ်၊ အူမကြီး၊ ဆီးကျိတ်၊ သားအိမ်၊ သားဥအိမ်၊ အကျိတ်၊...
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး နာကျင်ကိုက်ခဲနေချိန်မှာ အနာကျက်အောင်ကူညီပေးမယ့် အစားအစာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) အိုင်အိုဒင်းမှီဝဲပါ သိုင်းရွိုက်အဆင့် လျော့နည်းတာက ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက်တာ၊ နှေးကွေးလေးလံတာနဲ့ ဒေါသထွက်လွယ်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းက သိုင်းရွိုက်ဂလင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကောင်းစေရေးအတွက် ကယ်လ်စီယမ်၊...